WAXYAABAHA: XIDHIIDHA XIDHIIDHA MASKAXDA STRESS - XIDHIIDHKA
ACCUEIL » VIDEOS »TALOOYIN: 23 PLIERS L AMAANAYO STRESS
WAXYAABAHA: 23 PLIERS L AMAANAYO STRESS
CIQAALAHA IYO QALABKA LAGA HELO
Haddii aad shaqeysid badan oo aadan hurdo kugu filan helin, waxaad dareemeysaa walwal iyo daal. Cadaadisku waa qeyb ka mid ah nolosheena, waana muhiim inaad xusuusatid in ay sababi karto dhibaatooyin caafimaad oo aan tiro lahayn. Waxaanu diyaarinay ururinta nalalka Lifehacks si loo yareeyo heerka diiqada. Mashruucyadani waxay dhiirigelinayaan hal-abuurkaada oo ay yareynayaan cadaadiska Daaweynta farshaxanka waxay bixisaa siyaabo qumman oo lagu kalsoonaan karo xafiiska ama inta la baranayo: qaabaynta khadadka fudud, dhibcaha iyo qaababka waa geedi socod aad u wanaagsan oo daaweyn ah. Intaa waxaa dheer, waxaad ka heli doontaa farsamooyinka sawirada ee badan sida ranjiyeynta mindi. Fiiri fiidiyowgeena oo aynu ogaano, tallaabo tallaabo tallaabo ah, tababbar ku saabsan sida bambo loogu dhajiyo ilbidhiqsi. Iyo farsamooyin kale oo la yaab leh waa in lagu riixo maqalka leh rinji akrilik iyo naas. Nidaamku waa mid aad u fudud! Baro barashada!
Kubadaha ciriiriga waa sahlan tahay in laga sameeyo alaabooyinka la heli karo ee aad horeyba u haysato guriga. Dhammaan waxaad u baahan tahay waa baako iyo daawada cadayga si aad u geliso. Cadaadiska kubbadda ka hortagga cadaadiska ayaa leh faa'iidooyin badan. Tusaale ahaan, waxay sii deyneysaa xiisadda waxayna yareyneysaa cadaadiska. Kubadaha walwalka waxay sidoo kale kicinayaan wareegga dhiigga waxayna yihiin qalab ku habboon fekerka. Waxaad si fudud ugu isticmaali kartaa goobta shaqada.
Waxaad u isticmaali kartaa dhoobada oo keliya ma aha farxad. Waxay si fiican u shaqeysaa si aad u nadiifiso kumbuyuutarkaaga. Ku dheji qalabka iskuulka leh midabka iyo soodhaha si aad u hesho dhoobo.
Fikradda kale ee wanaagsan waa kaftan caan ah oo ku farxi doonta asxaabtaada! Qaado daawada cadayga ilkaha, iska saar daawada ilkaha iyo nadiifi tuubada. Dhuxul iyo barafka shukulaatada ee aad jeceshahay, waxaanu dooranay Snickers oo ka buuxi tuubo cadaydh caday ah. Ku raaxeyso!
00: 09 farsamooyin biyo ah oo wanaagsan
00: 55 daawada caday ilkaha
05: 30 Tilmaamaha Taabashada Jiilaalka
09: Rinjiyeynta 16
Tani waxay u muuqatay mid hore https://www.youtube.com/watch?v=r4feARiBph4
LES PAKGNE DHAMMAADKA SABABA LAGU QAADAY, ANNABELLA LAMEXICAINE HAD HOOYAY DID CAMP2 - HALKAN VIDEO